Abuurista Metro amaan badan Survey
Abuurista Metro amaan badan
King County Metro’s Safety, Security, and Fare Enforcement (SaFE, Fulinta Badqabka, Amaanka, iyo Lacagta baska) ayaa doonaaya inuu bulshada la abuuro bulshada (taasoo ka dhigan adigga!) qeexitaanka iyo higsiga waxa looga jeedo helitaanka badqabka iyo raacida gaadiidka Metro. Jawaabaha aad ka bixiso su'aalaha soo socda ayaa naga caawinaaya nidaaminta qeexitaankaas iyo higsigaas waxa looga jeedo dareemida iyo helitaanka badqab.
Xog aruurintaan waxay qaadan doontaa qiyaas ahaan 10-20 daqiiqo si loo dhameystiro.
Sida aad ku aqoonsanayso
Su'aalahaan ayaa ka caawinaaya Metro inay xajiiso inaan xooga saarayno codka dadka ay saamaynta ugu badan ku leeyihiin xeerarkeena badqabka, amaanka, iyo fulinta. Xogta looma adeegsan doono wax aan ka ahayn qiimaynteena ku saabsan mashruucaan. Waxaad keliya u baahan tahay inaad ka jawaabto su'aalaa aad ku qanacdo.
* 1. Ma u shaqaysaa ama qandaraas ma kula jirtaa King County Metro?
* 2. Midkee kamid ah kuwa soo socd ayaa sida ugu habboon kuu qeexaaya? (Fadlan dooro mid ma ka badan.)
Hindida Maraykan ama Dhaladka Alaska
Eeshiyaan ama Qof kasoo jeeda Jasiirada Baasifiga
Madoow ama Afrikaanka Maraykanka
Isbaanish ama Laatiin/a/x
Isiro badan ama labo Isir
Waxaan doorbidayaa is-qeexid (fadlan sheeg)
Naag nin isku badashay
* 4. Ma isku aragtaa inaad tahay LGBTQIA+ (Dadyowga Khaniiska iyo Khaniisiinta)?
65 sano ama kaweyn
* 6. Waa maxay luuqadda koowaad ee aad ku hadasho markaad joogto guriga?
Shiinees (Mandarin, Cantonese, iwm)
Wax kale (fadlan sheeg/cadee)
* 7. Waa maxay wadarta guud ee dakhliga sanadkii soo gala qoyskaaga?
Waxa ka yar $7,500
Wax ka badan $150 000
* 8. Ma qabtaa naafo iyo/ama caqabad (sida uu ku qeexaayo Americans with Disabilities Act (Sharciga Ameerikaanka Naafada ah)) taasoo xadidaysa awoodaada samaynta mid ama ka badan kamid ah shaqooyinka waawayn/maalin kasta ee nolosha. (Sida socodka, korista jaranjarada, aadista hawl, maqalka iclaannada, adeegsiga kumbuyuutarka, akhriska, ama fahanka xogta qoran ama astaamaha muuqda?)
* 9. Hadda ma waajahaysaa hooy la'aan? Ama dhawaan ma waajahday hooy la'aan?
* 10. Fadlan dooro jumlada sida ugu habboon kuu qeexaysa.
Waxaan caadiyan raacaa gaadiidka aan doorto. Waxaan heli karaa noocyada kale ee gaadiidka (sida gaari) haddii aan doorto inaan adeegsado
Waxaan caadiyan raacaan gaadiidka waayo ma haysto dookh kale (sida helitaanka gaari) si aan u tago meesha aan doonaayo inaan aado
Badanaa aniga ma raaco gaadiidka.
* 11. Kodhka boostada